KingSoft PC Doctor 3.7.0.7...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီနေ့ King Soft PC Doctor 3.7.0.7 လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...!Update လေးထွက်လာလို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! အားလုံးသိထားတဲ့ PC Cleaner လေးပါ...!ကွန်ပြူတာအတွက်တော့ အသုံဝင်တဲ့ Software လေးပါ...!အားလုံးသိထားပြီးဖြစ်သောကြောင့် ရှင်းမပြတော့ပါဘူး...!ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 5.11 MB ရှိပါတယ်...!စိတ်ဝင်စားရင်တော့ အောက်မှာ Media Fire လေးဖြင့်တင်ပေးထားပါတယ်...!
No Response to "KingSoft PC Doctor 3.7.0.7...!"